Amakhasino weBetsoft | Amakhasino amahle kakhulu anikwe amandla yiSoftware yeBetSoft
Ikhaya / Abahlinzeki begeyimu / amakhasino ebetsoft ahamba phambili eningizimu afrika
Amakhasino eBetsoft ahamba phambili eNingiZimu Afrika
Uma ufuna ukujabulela isipiliyoni semidlalo ye-3D yebhayisikobho, amakhasino e-Betsoft anikela ngalokho okufunayo. Ngesikhathi seminyaka ecishe ibe yishumi nambili ekudaleni imidlalo yasekhasino, i-Betsoft yakhe idumela emhlabeni wonke ngemidlalo eseyenziwe kuze kube manje. Inani lamakhasino asebenzisa uhlelo lwayo liyakhula kanye nokuthandwa kwemikhiqizo yayo phakathi kwabadlali. Abadlali baseNingizimu Afrika nabo banethuba lokuzama inqwaba yemidlalo yayo ebandakanya ama-slot evidiyo e-inthanethi, i-Roulette, i-Blackjack, i-Keno kanye ne-Lotto.
Sikulethela uhlu lwamakhasino angcono kakhulu e-Betsoft atholakalayo kubadlali baseNingizimu Afrika njengoba ekunikeza izindlela zokukhokha ezivumela ukubheja nge-ZAR okusho ukuthi akudingeki uchithe isikhathi sakho noma imali yakho ekushintsheni imali yakho ibe enye imali. Jabulela ama-slot e-3D angcono neminye imidlalo futhi uwine okukhulu.
Zama Lawa ma-Betsoft Online Casinos South Africa
Njengoba ibe embonini kusukela ngo-1999, i-Betsoft inikeza uhlu olugcwele lwemidlalo yasekhasino ebandakanya ama-slot evidiyo e-inthanethi, imidlalo yetafula, i-poker yevidiyo nokuningi okunikeza abadlali isipiliyoni sokudlala engathi basesakhiweni. Okuhlukanisa kakhulu umkhiqizo wayo emncintiswaneni ukusetshenziswa kwezithombe ze-3D emidlalweni yayo.
Ngaphandle kochungechunge lwe-SLOT3 oluzokwethulwa esahlukweni esilandelayo, inkampani yemidlalo iphinde yakhiqiza umdlalo omusha we-poker oqukethe izithombe ze-3D ongathathwa njengenguquko ngenxa yokusebenza kwawo. Uma uthanda imidlalo yakudala, ungakhetha kulabhulali enezihloko ezingaphezulu kwengu-150 ezinjenge-Keno, i-Roulette, i-Blackjack noma i-lotto.
Uma kukhulunywa ngokusebenza, singaqinisekisa ukuthi imidlalo yayo ayikhangi ngokubukeka kuphela, kodwa futhi iphephile futhi kulula ukuyisebenzisa. Ungayijabulela kupulatifomu yokudlala ngokusheha noma ngepulatifomu edawunilodekayo, futhi imidlalo ingadlalwa kuselula. Njengoba umncintiswano emakethe unzima, umakhi wesofthiwe usebenzela ukwenza kahle izihloko zakhe ukuze abadlali bakwazi ukujabulela imikhiqizo yakhe kumapulatifomu ahlukahlukene.
Ngaphandle kwekhwalithi yebhayisikobho yemishini yama-slot e-3D eyenze ihlonishwe umhlaba wonke, imidlalo abayikhiqizayo inikezela ngohlu olubanzi lokubheja olufanele zonke izinhlobo zabadlali. Kodwa-ke, isici esiyinhloko semikhiqizo ye-Betsoft ukuphatha kahle abadlali. Ukungahleleki kwemidlalo yayo kuqinisekisiwe futhi ungakuhlola ngokuvakashela iwebhusayithi ye-Betsoft noma ubheke izitifiketi zamakhasino e-Betsoft ahlinzekwa ngabacwaningi mabhuku abazimele abaqapha futhi bashicilele isilinganiso samaphesenti akhokhelwayo.
Okuhamba Phambili ku- Slots ka BetSoft futhi nama Jackpots akhulayo.
I-Betsoft ivelele esixukwini ngokukhipha uchungechunge lwayo lwe-SLOT3 kubandakanya i-Mr. Vegas, i-Safari Sam ne-Slotfather ngemidwebo egqamile ye-3D. I-Slotfather umdlalo wayo othandwa kakhulu onezithombe ezinemibala efana nopopayi we-3D ezisebenza kahle nengqikithi yezigebengu. Kulabhulali yayo ye-ToGo ungathola wonke ama-slot avela ochungechungeni lwe-SLOT3 olwenzelwe amadivayisi eselula e-Android ne-iOS.
Ngaphandle kwalokho, imidlalo yayo eminingi inendikimba yabalingisi abavela kumanoveli amaNgisi ekhulu leminyaka ye-19. Ngakho-ke uma uthanda ukufunda izincwadi zesikhathi se-Victorian, ungawathokozela ama-slot ano-Dr. Jekyll no-Mr. Wild, u-Dr. Frankenstein noma odume ngokuncishana u-Scrooge.
Noma ngabe ungumgembuli ogembula imali encane noma enkulu, ungathola umdlalo ofanelana kahle nawe njengoba wonke enikezela ngezinombolo ezahlukahlukene zama-payline, kusuka kwezinhlanu kuya kwezingu-150 zokuwina kanye nohlu olubanzi lwemali nezinga lokubheja. Ungajabulela nezici ezahlukahlukene zebhonasi ezintsha kubandakanya izimpawu ze-wild kanye ne-scatter, ama-multiplier nama-spin amahhala. Amanye ama-slot ayo anikela ngemidlalo emibili eyibhonasi eletha ama-spin amahhala kanye nomklomelo osheshayo. Kwezinye izikhathi le midlalo eyibhonasi ingadinga ukuthi umdlali axhumane nayoi okungathatha umdlalo ufinyelele ezingeni elisha noma kunikeze isici sokugembula esikuvumela ukuthi uphinde okuwinile noma ulahlekelwe yikho konke okuzuzile kumzuliswano wokugcina.
Uma kukhulunywa ngama-jackpot akhula njalo, ungajabulela ezinye zezihloko ezinjenge-At The Copa, i-Good Girl Bad Girl, i-Mr. Vegas kanye ne-Glam Life. Isici esiyinhloko sama-jackpot ayo wukuthi zilethwa umdlalo othile okhethe ukuwudlala futhi izimali azisebenzi phakathi kwemidlalo ehlukahlukene. Lokhu kufaka isandla ekuqondeni kwemidlalo ukukwazisa kahle ukuthi yini oyilwelayo. Ngakolunye uhlangothi, ama-jackpot awamakhulu kangako njengalawo angatholwa ngokudlala kwamanye amakhasino ngokuvamile anikela ngemiklomelo evela kuqoqo lama-jackpot elikhuliswa ngawo wonke ama-slot. Lokhu kusho ukuthi ama-jackpot akhula njalo anikezwa ngama-slot avela e-Betsoft akuvamile ukuthi adlule umkhawulo ka-R500,000.
Amakhasino e-Betsoft Izindlela Zokukhokha
Amakhasino e-inthanethi axhaswe yi-Betsoft anikezela ngezixazululo eziningi zokudiphozitha kanye nokukhipha imali. Izindaba ezinhle kubadlali abavela eNingizimu Afrika wukuthi ivumela ukudiphozitha nokukhipha imali nge-ZAR, ngaleyo ndlela konga isikhathi sakho futhi ngokubaluleke kakhulu konga imali yakho njengoba ungadingi ukushintsha imali yakho ibe enye imali noma ukhokhe imali yokushintshanisa.
Ungakhetha ezindleleni ezahlukahlukene zokukhokha ezinikezwa yinkampane yemidlalo kubandakanya Amakhadi Esikweleti kanye nawe-Debit, Ukudlulisa Imali Ngebhange (Bank Transfers) noma ezinye izindlela zokukhokha zakuleli. Noma kunjalo, ungathola ama-e-wallet afana ne-Skrill noma i- Neteller, indlela elula kunazo zonke yokudlala ku-inthanethi njengoba ikuvumela ukuthi udiphozithe futhi ukhiphe imali ngokushesha nge-ZAR, imvamisa mahhala.
Kungani Udlale Emakhasino e-Betsoft?
Njengoba kunabo-opharetha abaningi bemidlalo abanikezela ngezihloko ezivela kubakhi abahlukahlukene be-softhiwe, ukukhetha ikhasino oyithandayo akuyona into elula ukuyenza. Uma ukubukeka kwemidlalo kuyisici esibaluleke kakhulu sokudlala kuwe, kufanele ucabangele ukunikeza amakhasino e-Betsoft ithuba njengoba imidwebo yawo nemifanekiso yawo ingenakuqhathaniswa emakethe.
Lapho usuqale ukubheja ezindaweni zayo zokugembula noma eminye imidlalo yasekhasino uzothola ukuthi inikela ngegeyimu ebushelelezi enamathuba amaningi okuthuthukisa amathuba akho okuwina, ikakhulukazi ngenkathi udlala imishini yama-slot ekunikeza inqwaba yezici ezikhethekile zokuzijabulisa nezizuzisa kakhulu.
Ngemuva kokungena embonini, i-Betsoft yakhe ukuzethemba ngokusebenzisana nabo-opharetha bemidlalo ye-inthanethi abahloniphekile abanikeza abadlali ithuba lokudlala elilungile neliphephile. Ngaphandle kwalokho, abadlali baseNingizimu Afrika bangazuza kokunikezwayo ngamakhasino e-Betsoft asohlwini njengamabhonasi ama-spin owathola ngediphozithi engekho noma lapho ubhalisa angase abe wusizo ngenkathi uzama eminye yemidlalo futhi ufunda imithetho.